[Ankapobeny ] 24 Jolay, 2008 09:56
Atao fitadivam-bola ny mpianatra manala BAC
Tsy misy hetsika afatsy fanentanana ny ankizy mpanala BAC hanala azy ankehitriny ao @ onjam-peo sy ny fahitalavitra. Izany no tena oe tsy mivoaka ny ala akory dia efa misihoka. Asa zao raha mba hifantoka tsara @ fanadinana ireto ankizy mpianatra ireto na tsia fa dia tena mahonena ny maheno ireo dokam-barotra. Eo ohatra ny manala azy vita bac miaraka @ Olombelona Ricky iray izay, ny faharoa dia ny dihy techtonik mandramaraina, ny fahatelo dia ny smile party eny ankorondrano, ary farany dia Tovo jhay. Ny mahalasa ny saiko fotsiny dia ny oe fa heverin-dry zalahy manambola be ary ireto ankizy cibler-ny ireto!!! sady avy eo dia hanaonao foana any satria hivoaka alina koa, misy azy ny raiamandreny raha mba afaka moa maninona fa raha sanatria tsy afaka no tena voa mafy. Tokony mba hieritreritra ihany ny mpikarakara lanonana fa diso tia tena loatra.
Manaraka izay dia nodimandry t@ alahady 20 jiolay teo i Rabenahy Paul izy moa dia mpampianatra physique chimie no sady maitre de conférence eny ankatso tao @ sampana science, ary nampianatra tao @ acem. Mety misy mahafantatra azy ihany ny akamaron'ny mpianatra nanao cours tao @ Acem. Mirary fiononana feno ho an'ny fianankavina isika.
Marary mafy eny @ réanimation eny Ilafy kosa ny filoha ny Leader Fanilo Herizo Razafimahaleo. Avy nodidina moa ny lehilahy ka tsy nahatsiaro tena intsona na oe etat comateux izy izany ankehitriny. Ity vaovao ity moa dia navokan'ny gazety mpiseho isan'andro iray eto madagasikara.
Mbola mahalasa saina ihany koa ireo zavatra boribory maro hita tao Manakara. Ary lasa resaka be mihitsy ao @ radio sy ny tele satria dia ny mponina no nahia ireo zavatra ireo. Ny filoha moa dia niteny oe misy manao trafika na fitaovam-piadina eto. efa misy mafia zany eto amintsika ka ahina ny fifandonana @ fisamborana ireo atidoha manao io trafika io.